Izindlu e- Bampton - I-Airbnb
Izindlu e- Bampton
Indlu encane ibungazwe ngu-Satu&Ollie
U-Satu&Ollie Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela ku-Bampton Cabin! Le khabethe entsha yangasese yesitayela se-loft iyindawo yakho encane ekahle yokubaleka ezintabeni e-Banff National Park. Itholakala kalula, i-Bampton Cabin iyizinyathelo zangempela ezivela kuyo yonke into yedolobha i-Banff engayinikeza - ungakwazi ukupaka imoto yakho endaweni yakho yokupaka eyimfihlo engaphandle komgwaqo, futhi ungalokothi ubhekane nokushayela/ukupaka sonke isikhathi ulapha!
Sakha i-Bampton Cabin ngo-2018 ngemuva kwekhaya lomndeni wethu, i-Bampton Cottage e-Banff enhle, e-Alberta.
IBampton Cabin iyindawo "yendlu encane" enesitayela sokuhlala. Igumbi lokulala eliphakeme linombhede olingana nendlovukazi obheka ngaphezulu kwendawo yokuhlala / yasekhishini. Igumbi lokugezela eligcwele nendawo eningi yokuphumula, ukupheka ukudla kwakho futhi ujabulele umoya wezintaba kuvulandi yakho yangasese ugcwalise le-oasis yezintaba.
Ikhabhinethi ihlanganisa indawo yokupaka yangasese ngaphandle komgwaqo, ekwenza ukwazi ukukhohlwa imoto yakho sonke isikhathi ulapha ujabulela idolobha lethu elihle.
Indawo yethu ayinakuba ngcono - ngokweqiniso uyizinyathelo ezisuka kuzo zonke izenzo ezenziwa yi-Banff Avenue. Izindawo zokudlela, imigoqo, ukuyothenga kanye namabhasi e-shuttle aya ezintabeni zasendaweni angaphansi kohambo lwemizuzu emi-5!
I-Beaver Street ingenye yemigwaqo endala yokuhlala e-Banff! Hamba endaweni yethu futhi ubone zonke izindlu eziyigugu esizungezwe yizo (ikhaya lethu lifakiwe!)
I-Beaver Street ihambisana futhi eduze ne-Banff Ave., umgwaqo omkhulu lapha e-Banff. Awukwazanga ukusondela esenzweni!
Ikhabethe lingemuva kwendlu yethu, nokho lihlukaniswe ngothango ngokuphelele (unomnyango wakho wangasese). Singase seqe izindlela endaweni yokupaka, nokho cabanga lokhu njengendawo yokubalekela yangasese! Sitholakala nganoma isiphi isikhathi (mathupha/ngombhalo/nge-imeyili) uma kukhona izinkinga/okukukhathazayo noma ngabe ufuna nje ukuxoxa ngezinto okumele uzenze noma ufuna izindawo zokudlela!
Ikhabethe lingemuva kwendlu yethu, nokho lihlukaniswe ngothango ngokuphelele (unomnyango wakho wangasese). Singase seqe izindlela endaweni yokupaka, nokho cabanga lokhu njengendawo…
USatu&Ollie Ungumbungazi ovelele